Ụmụ nwanyị mara mma - ogologo, mkpụmkpụ, silk, owu, na lace, ụdị, ụdị, maka ụmụ agbọghọ, site na calico, viscose, batiste, na ụkpụrụ, ngwakọta, na iko
Night Shirt - 50 foto nke kachasị mma na nke ọma ụdị
Uwe dị otú ahụ, dị ka ebe a na-amachi anya, dị na uwe mgbochi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ nwanyị nile. Ihe a kwesịrị ịbụ ihe dị mfe ma dị jụụ dị ka o kwere mee, ebe ọ bụ na ọ bụ maka ihi ụra na izu ike. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ụdị ụdị ngwaahịa ndị a bụ ndị na-adịghị mma, ndị na-adọrọ mmasị na ndị na-adọrọ adọrọ, nke ndị nnọchianya nke inwe mmekọahụ siri ike apụghị inye aka.
Ebe ụmụ nwanyị na-ehi ụra
Ulo oru mbu nke ndi nwanyi choro na otutu afo iri na ise, tupu umuaka umuaka ahu we dinara n'otu uwe, nke ha na-aru ogologo ubochi dum, ma o bu na enweghi ya. Ka ọ dịgodị, n'oge ahụ, ngwaahịa ndị a dị naanị obere ọnụ ọgụgụ nke ndị inyom - n'ihi na ha na-efu oke ọnụ, ha ga-enwe ike ịzụta ọkwá dị elu. Achịcha nke narị afọ nke iri na ise mere site na nnukwu igwe na-enwe ihe dị iche iche a chọrọ mma - nkwụsị nwere ike ịbụ larịị ma ọ bụ nnukwu bọtịnụ.
A na-ekesa ihe ndị yiri ya na uwe mposi na narị afọ XIX. Kemgbe oge ahụ, ha na-agbasawanye mgbe nile - ebe a na-agbakwunye ụdị owu na linen, silk, satin na ihe ndị ọzọ. Na oge ọhụụ ọ bụla ngwaahịa nke agba agba ọhụụ pụtara - site na nro pastels na-egbuke egbuke na "mkpu", site na nke ọ gaghị ekwe omume iwepụ anya. Taa, a na-etinye ebe ndị mara mma nke ụmụ nwanyị dị iche iche, n'ihi ya, onye ọ bụla na-eji ejiji eme ihe n'onwe ya.
Ebe nchekwa silk
Uche nke silk nke ndị inyom - ezigbo nhọrọ maka ndị inyom ndị chọrọ ịmasị mmasị ị hụrụ n'anya. Ụdị dị iche iche nke ihe onwunwe a dị oké ọnụ, dị oke ọnụ ma dị egwu, nke na-emepụta onyinyo nwanyị mara mma nke mara mma maka onye na-eji oge ọ bụla na ọgbọ. Ihe ọzọ na-emepụta na ngwaahịa ndị sitere na silk nkịtị bụ na ha anaghị ada ụra mgbe ha na-ehi ụra, n'ihi ya, nwa agbọghọ ahụ ga-ele anya nke ọma ọbụna n'ụtụtụ.
Nwanyị ụra - owu
Okwute ndị mara mma nke owu na-eme ka mma na-ekpo ọkụ, na-ekwe ka akpụkpọ ahụ na-eku ume, nke mere na nwanyị ahụ adịghị afụ ọkụ ma ọ dịghị enwe nsogbu n'oge ụra. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ndị a nwere njupụta zuru ezu, ha na-adabara ọbụna maka oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-akwado usoro ihi ụra n'ime ụlọ juru oyi. Ụdị dịgasị iche iche dị otú ahụ dị oke - nke a na-egosi dịka ihe dị jụụ na nke dị nkenke, na nhọrọ ndị na-adọrọ adọrọ maka ịkọrọ ụra na onye òtù ọlụlụ.
Uwe abalị site na viscose
Viscose bụ ihe siri ike ma dị nro, nke dị mma maka ịkwa akwa akwa ụra. N'ihi ọdịdị nke ákwà a, a na-eyi akwa ụra nke a ga-eyi ruo ogologo oge, na-agbasaghị ya ma ọ bụ na-apụ n'anya. N'iburu n'uche nke dị elu, ọ naghị egbochi mmegharị ahụ ma ghara igbochi ya, ma mgbe ụfọdụ, nwanyị nwere ike inwe mmetụta na ọ gba ọtọ kpamkpam. Tụkwasị na nke ahụ, viscose bụ ihe dị mfe, ọbụnadị uwe elu ogologo oge n'elu ala ya agaghị enwe ibu ọ bụla.
Nightgown nke chintz
Uwe elekere nke ehihie dị mfe, ma, n'otu oge, mara mma. Ọtụtụ mgbe, ihe a na-ebipụta na-edepụta ụmụ nwanyị n'isiokwu a na-ese onyinyo, nke mere na ihe ndị e ji akwabe ya na-emepụta foto ndị nwere ịhụnanya ma mara mma. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị nke calico n'ụzọ zuru okè na-emesi mkpụmkpụ na gburugburu nke nwanyi , na-enye ya na ìhè kachasị mma. "Pyshechkam" nwere ike ịbịaru owu na - acha ogologo - ọ na - ekpuchi ezughị okè, ma ọ gaghị adị ka mkpuchi.
Ugbo ala site na batiste
A maara nke ọma na ụwa ejiji n'oge ogologo oge, Otú ọ dị, n'oge ha dị adị, ha jisiri ike gbanwee. Ya mere, ụdị nke oge a nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, ma ọ bụ obere agbụ, dị mfe na laconic ma ọ bụ na-eji ya mma, na ntinye dị iche iche, ihe eji eme ihe, ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ebe a na-eche nche site na cambric na-enyekarị ntụsara ahụ kachasị mma. N'ihi njupụta zuru ezu na ya, ọ bụghị oyi na oyi na oge oge-oge, mana ọ naghị ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ. Tụkwasị na nke a, ngwaahịa ndị a nwere ike iji anya zoo ụfọdụ adịghị ike nke ọnụ ọgụgụ ahụ, ya mere, ha nwere ohere inwe mmekọahụ nke ọgbọ ọ bụla.
Nri abalị Satin
Ebube mara mma ebe a na-eme satin - a na-egbuke egbuke. N'ile anya, ha na-atụgharị anya na ụdị nke silk nkịtị, Otú ọ dị, dị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nnọchiteanya nke mmekọahụ. Ka ọ dị ugbu a, n'adịghị ka ngwaahịa silk, satin shirts adịghị atụfe ikuku n'ụzọ dị mma ma nwee ike ime ka ahụ ghara iru gị ala n'oge okpomọkụ.
Mgbe ị na-ehicha ihe ndị a na-ekpo ọkụ nke uwe ejiji ndị inyom, ọ bụghị naanị ụdị ákwà na ihe dị iche iche ka a na-eji, kamakwa ụdị dịgasị iche iche nke ime ụlọ, ndị nke ọ bụla enweelarị obi nke ọtụtụ ụmụ nwanyị. Ya mere, ọ bụrụ na ụmụ nwanyị tozuru etozu na-ahọrọ ịhọrọ ngwaahịa dị mma ma gbanwee ụdị ejiji ha dabere na ọnọdụ ihu igwe, mgbe ahụ, na mkpuchi nke ndị na-eto eto, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ụra na-ehi ụra, ọ bụ maka ịrata ndị nnọchiteanya nke nwoke na nwanyị.
Nightgown na iko
Ogologo uzo di iche iche enweghi iko ndi na-akwado ihe ojoo, nke na-eme ka umunwanyi nwee ike izuike mgbe ha na-ehi ura. Ka ọ dị ugbu a, na nchịkọta nke ndị na-emepụta ihe a ma ama na nhọrọ na iko, nke na-adọrọ uche gaa n'akụkụ kachasị akụkụ nke akụkụ ahụ. Ihe ndị dị otú ahụ dị mma maka oge ịhụnanya na mmekọrịta chiri anya na onye hụrụ n'anya, Otú ọ dị, mgbe ha na-ehi ụra, a na-atụ aro ha ka a gbanwee ha ka ha bụrụ ndị na-edozi onwe ha, ọ bụghị ijikọta mmegharị ahụ ma ghara ime ka ahụ erughị ala n'oge oge sọks.
Ejiji abalị na eriri
Ugwu ala dị iche iche, nke a na-eji akwa mma, nwere ike ịmasị nwoke ọ bụla. A mara nke a na-ewu ewu na ụwa ejiji na ọtụtụ narị afọ, ma na oge a nile, ọ dịbeghị mkpa. Iji ichota ihe eji eji ejiji nke ndi nwanyi, bu n'obi maka ihi ura, otutu ihe di n'ime ihe ndi ozo ma obu n'okpuru ara. Ihe na-adọrọ adọrọ mmasị na ụdị na- agbanye ọnụ ma ọ bụ uwe aka.
Tụkwasị na nke a, ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ ihe ndị e mepụtara kpamkpam nke eriri nwanyị. Uwe ejiji ehihie nwere ike ịmalite ntakịrị, na-eme ka ụmụ mmadụ nwee ọchịchọ na-enweghị isi na ịmalite ime ihe ike mmekọahụ. Ihe kachasị mma bụ ihe ndị e ji ekpuchi ákwà, nke a na-eji agba odo ma ọ bụ na-acha uhie uhie. Onye na-eto eto na-alụ nwanyị ọhụrụ maka abalị mbụ ya nwere ike ịhọrọ ihe ọcha ma ọ bụ ihe nro dị nro nke ọ bụla nke pastel shades.
Nightgown na foto
E nwere ike iji mmabe dị iche iche mara mma nke ọma na ogologo oge nke ụmụ nwanyị, n'etiti ihe oyiyi nke okooko osisi na ihe dịgasị iche iche na agbụrụ floristic. Tụkwasị na nke a, ụmụ agbọghọ na-ahọrọkarị ngwaahịa ndị nwere ihe ndị na-adịghị mma, ntanetị ọchị, ịṅomi ihe ndị na-atọ ọchị ma ọ bụ ihe osise, ihe osise anụ.
Ụdị anya dị mma ma na-adọrọ adọrọ, nke na-abụghị nanị eserese, kama yana ederede kwekọrọ. Dịka ọmụmaatụ, nwa agbọghọ mara mma ga-ahụ ihe oyiyi nke nwa-nwanyi ahụ na nchịkọta egwu ahụ "Nwa-ukwu ahụ nwere ike ime ihe niile!" Ụmụ agbọghọ nwere ike ịhọrọ uwe elu dị mma na-ejiri ya ejiji - ọ dị mfe ma nwee ike mesie ntorobịa na coquetry nke onye nwe ya.
A na-eji ígwè na V-neck
Ezigbo ụlọ ala maka ụmụ agbọghọ nwere ike inwe ụdị dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-eme ka nkwonkwo V ha dị ike, jiri nlezianya na-amịpụta igbe ahụ ma mee ka ọ dị mma dị ka o kwere mee. Ihe omuma a bu ihe zuru oke, okwesiri ihi ura na mpako, ya na enyi gi n'anya. Tụkwasị na nke a, ngwaahịa a anaghị achọ ka agbakwunye agbakwunye nkwado ara - ọ dị oke mma na bust nke ọ bụla ọbụlagodi n'enweghị nkwado.
Nchikota a kacha mara amara n'etiti nwoke na nwanyị, n'ihi na ọ na-enwe mmetụta nkasi obi maka abalị dum ma n'otu oge ahụ ka ọnụ ọgụgụ ahụ na-adọrọ adọrọ ma na-akpọ òkù. Ngwaahịa a bụ nhọrọ dị mma maka ndị inyom lụrụ di, n'ihi na ọ bara uru maka ụra nkịtị na ezumike, na maka egwuregwu ịhụnanya na nlekọta ndị dị mma.
Dị ka a na-achị, a na-ejikọta njikọta nke lace, silk ma ọ bụ guipure ma nwee nkezi ogologo - dịka n'etiti etiti ụkwụ. Ụdị a na-enyere ụmụ nwanyị aka igosi ụkwụ ha dị ogologo na ụkwụ ha, ma ha adighi ele anya na ha adighi nma. Ụdị na nhọrọ maka mkpochapụ nke mmekota dị iche iche - na-acha ọcha nightshirt na-ewu ewu pụrụ iche na ụmụ nwanyị mara mma, nke na-egosi na obi ebere na ịdị ọcha, na-acha uhie uhie na-nlereanya nlereanya bụ nke na-eme ka ị dị ka nwanyi vamp.
Uwe umuaka umunwanyi
Uwe dị n'ala maka ụmụ agbọghọ zuru oke
Ebere jaket gbadaa na ala
Sneakers maka ịgba egwú
Uwe ogologo oyi - 40 foto nke ihe oyiyi kacha mma na ogologo uwe elu
Nkume akwa - akwa-na-ekpuchi na uwe ejiji nke a na-eyi oge
Ndị na-agba ọsọ oyi - olee otú ịhọrọ ihe kacha mma na ihe ị ga-eyi?
Nkume akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị
Ista achicha na-eme achịcha
Ngwori egwu sitere n'aka aka ike
Ụdị poteto "Gala" - njirimara
Nkọwa nke piich - calorie
Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ - tincture
35 foto mara mma site na nnụnụ anya
Ibu oke nke imeju
Nkume Jade - Njirimara, akara zodiac
Ihe e ji esi rụọ nkume a na-arụ maka kichin
Lush pancakes na kefir n'enweghị nsen
Turtle Island n'onwe gị
Osisi okooko osisi na - eto eto - ụdị kacha mma ị nwere ike ịme ụlọ gị mma
Ụlọ eze nke Monaco aghọwo ebe obibi Santa Claus
Kedu otu esi emeri ihere?
Onyinye na pearl
Ọkpụkpụ siri ike na nwa ahụ